सामुदायिक विद्यालय सहयोगका लागि सिभिल बैंकद्वारा सहयोग - Aathikbazarnews.com सामुदायिक विद्यालय सहयोगका लागि सिभिल बैंकद्वारा सहयोग -
creative writing studia warszawa hire someone to write your college essay chegg homework help expert question yale creative writing application creative writing worksheets for5year olds kenyon creative writing summer program quote about doing homework best creative writing masters programs in the world essay about how to help the environment write my essay joke crime scene description creative writing help in research paper creative writing mountain climbing creative writing unit 1 quizlet university texas mfa creative writing custom writing us phd in creative writing technical writing vs academic writing vs creative writing did do your homework traduccion help makeathesis statement criteria creative writing creative writing on understanding write my essay in 12 hours columbia university creative writing major creative writing pros and cons quoting creative writing price thesis binding creative writing graduate programs list help writingabusiness plan uk i need help with my college essay
सामुदायिक विद्यालय सहयोगका लागि सिभिल बैंकद्वारा सहयोग
समृद्धिका लागि सिभिल बैंक भन्ने नाराका साथ अगाडी बढिरहेको सिभिल बैंकले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सुरेन्द्र ढकाल फाउन्डेसनलाई सामुदायिक विद्यालय सहयोगका लागि आज एक कार्यक्रम आयोजना गरि सहयोग रकम हस्तानतरण गरेको छ । सिभिल बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिलकुमार पोखरेलले उक्त सहयोग रकम फाउन्डेसनका अध्यक्ष सुरेन्द्र ढकाललाई हस्तानतरण गरेका थिए ।
पाँच लाखभन्दा बढी ग्राहकहरुलाई ११४ शाखाहरुमार्पmत सेवा प्रदान गरिरहेको सिभिल बैंकको यस एक्सटेन्सन काउन्टर सहित ८ एक्सटेन्सन काउन्टरहरु स्थापित गरिसकेको बैंकले जनाएको छ ।
जसमध्ये ५ वटा एक्सटेन्सन काउन्टरहरु नेपाल सरकारको कर तथा राजश्व संकलनगर्न स्थापितगरिएको हो । साथै बंैकको हालसम्म८९ एटियम रहेका छन् । बैंकले हालसम्मकरीव रु. ८२अर्व भन्दा बढी निक्षेप परिचालन गरी रु. ७८अर्व भन्दा बढी कर्जा लगानी गरीसकेकोे छ ।
लक्ष्मी बैंकको ५औँैँ एक्स्टेन्सन काउण्टर राजविराजको जिल्ला अदालतमा
एन आई सी एशिया बैंक सार्क क्षेत्रको साफा उत्कृष्ट वित्तीय प्रतिवेदन अवार्ड
एनसेलको खुद मुनाफा १२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ